Is koollo Bituminous xireyaashaba Dahaarka Jirka / saqafka guri xuub ku xaraysid - Shiinaha Xinle Hongtai biyaha
xuub biyuhu shinida
Aluminum dahaarka leh film PET
Shiinaha modified shinida productio xuub biyuhu ...
Wax kabadal Asphalt Tar APP Dahaarka biyaha Waayo Roa ...
Is koollo Bituminous xireyaashaba Dahaarka Jirka / qoyska ...
Is koollo Bituminous xireyaashaba Dahaarka Jirka / saqafka guri xuub ku xaraysid
Nooca: Dahaarka biyaha
Number Model: SBS
Dhumucdiisuna: 3mm, 4mm
Codsiga: saqafka, dhulka hoostiisa, qaybta hoose, derbiga, pool, iwm
Waxyaabaha dusha: film PE, bireed Aluminum, Sand, daataa Schist, iwm
Inforcement: caag ama Maro
Dabacsanaan heerkulka Low: -30 ° C, -20 ° C
Dabacsanaan heerkulka High: 70 ° C
Muddada Kaydinta: Hal sano
Miisaanka: 30-50kg / duudduuban
kiiskaaga ama / sariirtaada PS alwaax: Waxaanu leenahay xuquuqda madax bannaan, waayo, soo dejinta iyo dhoofinta.
10 maalmood ka dib marka la helo 30% deposit
Is koollo Bituminous xireyaashaba Dahaarka / saqafka guri xuub ku xaraysid
Polyester Is-koolo kabadal Bituminous xireyaashaba Dahaarka ka kooban tahay dhoobo sidii ay qayb weyn ee, SBS, SBR iyo tackifying cusbi sida ay HABEEYAHA iyo caag sida ay xoojin. Its dusha sare waxaa lagu daboolayaa polyetylen (PE) film, ciid ama Silicon film strippable iyo hoos dusha waxaa lagu daboolayaa kala sii daayay filimka.
1. cusbi Tackifying bixisaa xuub xoog koolo xoog badan taas oo ka dhigi kara xuubka ku eekaan dusha salka u xidh.
2. xuub wuxuu leeyahay dalool wanaagsan u adkaysta, hantida jeex adkaysi iyo hadal haynta adkaysi leh caag ah sida ay xoojin.
3. xuubka wuxuu noqon karaa bogsiinta is for dildilaaca yar ay keento deegaanka.
4.-wakhti dheer dhagdhaga hubaal ma fall-off ama baxsiga kasta oo u dhexeeya xuub iyo dusha salka.
5. xuub waxay leedahay xoog siligga sare iyo hantida muruqa fiican, waxa ay joogteyn karto ay qaab xitaa in ay dhacdo dildilaaca iyo lahayo ku dushiisa salka.
6. No go'in heerkulka sare iyo ma dildilaaca heerkulka hooseeyo.
7. iska caabin ah kiimikada Wanaagsan, iska caabin ah daxalka iyo iska caabin ah cimilada.
Habka dhismaha iyo fiiro:
1) nadaafadda aasaasiga ah
Nadiifi qashin, heerka off haddii ay jiraan bararto af badan, waxaa laga yaabaa in loo dhiso oo aan biyo lahayn, qoyaan waa u ogolaan.?
2) waddo xuub sheet xireyaashaba ku
faafay xuub sheet biyuhu la qayb ka ah soo food saartay on dhulka hoostiisa, Marka xaareysa sheet xuub ku xiga. fiiro gaar ah u daboolaa in lays ku laayeen in ay sii xirmi oo aan farqiga kasta.
3) daboolaa si wadajir ah xuub sheet biyuhu
(1) daboolaa sheet xuub biyuhu: Jeex xuub Go'doon ah Double-dhinac is-koolo of polymer hoos dushiisa, cajalad diidanaa mar kale saar ka dib markii filim go'doomin dushiisa, Oo ku xiran gariiradda doono qaataan si ay paste cajalad ah, burburin xoogan oo qabanaya, marka loo baahdo si kululaynta ku haboon cajalad, paste saamaynta badan yahay ideal.more wanaagsan si ay u qalalaan xaaladaha codsan doonaan.
(2) daboolaa si wadajir ah sheet xireyaashaba xuub: cajalad ul xabagta Majarafad ka dib dhabta, habkan waa mid ku habboon in lakabka biyuhu laga yaabaa in biyaha roobka.
(3) Butt wadajir ah sheet xuub biyuhu wax gariiradda ocking ku qabanaya ay qaataan gariiradda DNM, gariiradda jarjar strip iyo meesha wejiga xabagta kor, trea off dusha ka dib markii xuub go'doomin, paste baadkiisa sare ee gariiradda, iyo burburin xoog leh oo qabanaya. hab ku habboon yahay, waayo, lakabka biyuhu laga yaabaa in biyaha roobka, sidaas darteed iska ilaali karaa in la sii daayo.
4) Shaabad heshiiska:? Xagal kitaabkii duudduubnaa DNM of yin iyo Yang iyo Guntin ma u baahan tahay dhismaha lakabka dheeraad ah, laakiin Jinka dukaan gariiradda badan oo la dhamaystiro ka dib markii Guntin in la faahfaahinta dhismeedka macaamilo waa complete iyo cidhiidhi ee processing jeegga , waxs madaxa raso dabaqa dhulka hoostiisa ah, bool, bulaacadaha iyo faahfaahinta kale ee, waa in ay qaataan adkeynaysa la koollo, ka dibna cadaydo daahan biyuhu inay heshiiska dhameystirto.
5) urur aqbalo
6) Xiga dhismaha, si uu u dhameystiro dhismaha daaha biyuhu, waxaa la xoojiyay karo la taaban karo lakabka go'doomin binding.d - Ka dib markii xuub saareen, dhisaan ilaalinta iyo lakabka go'doomin sida ay design daaha biyuhu.
1. balakon, musqusha, jikada
2. Tanalka, saqafyada warshadaha
3. Flat iyo saqafyada sloped
4. Qolalka, Foundation oo derbiyadeeda xafidaada
Kaydinta & raridda
Dhig xuub vertical.
Buuxeen sariirtaada alwaax xoog leh oo daboola film ihin lacala slant
ka dab fogee inta lagu guda jiro kaydinta iyo gaadiidka.
Xuubka waa in lagu kaydiyaa xaaladaha qalalan iyo hawo si ay u ilaaliyaan qoraxda iyo da'ayo iska.
Waxaanu qiimaynaa baaritaan kasta noogu soo diray iyo in la hubiyo dalab tartan deg deg ah. Haddii aad ka dalban noo, waxaan balan qaadi karo tayada.
Waxaan gelin amarkaaga jadwalka saarka dhagan our in aad loo hubiyo in waqtiga dhalmada wakhti iyo kuu soo diri ogeysiis maraakiibta sida ugu dhaqsaha badan aad kala geeyey. Waxaan ixtiraamaan celintaada ka dib markii aad heshay alaabta.
Sababtoo ah waxaan wax ka badan 10 sano oo waayo aragnimo ah in industry biyuhu, alaabta oo dhammuba aannu socon ta caadiga ah ee qaranka! Waxaan balan qaadi karo adeeg heer sare ah iyo dhalmada degdeg ah! Your amarka waa lagu soo dhawaynayaa waqti kasta!
Previous: laami modified line-soo-saarka xuub biyuhu
: Next line-soo-saarka xuub xireyaashaba shinida
Dahaarka biyaha shinida
Bituminous xireyaashaba Dahaarka
Bituminous xireyaashaba Products
Flat uu saqafku ku xaraysid Dahaarka
SBS kabadal shinida Sheet saqafka
Factory Is-koolo kabadal shinida Waterpro ...
SBS 1.5mm-5mm kabadal shinida elastomeric Wate ...
3mm, 4mm kabadal Dahaarka biyaha bituminous ...
Sheet xireyaashaba bituminous Is-koolo Ma ...
SBS / APP kabadal shinida Mater Sheet biyaha ...
PE xireyaashaba laami dabacsan qiimaha xuub